Juunyo | 2011 | WEEJIDOW
Archive for Juunyo, 2011
ban kin-Mon Oo Sheegey In Shabaab Caqabad Ku Tahay Sidii Loogu Gargaari Lahaa Shacabka Soomaaliyeed
Juunyo 30, 2011
Madaxa howlaha isku dabaridka gargaarka Q.midoobay u qaabisan arimaha Soomaaliya Mark Bowden, ayaa shalay waxa uu saxaafada kula hadlay Magaalada New York ee wadanka Maraykanka, waxa uuna walaac ka muujiyay xaalada abaareed ee ka jirta dalka Soomaaliya asaga oo eedayn u soo Jeediyay Ururka alshabaab.
Mark Bowden ayaa ku tilmaamay abaaraha ka jira Soomaaliya mid la mid ah tii dhacday 1992-dii, waxa uuna sheegay in Hay’adihii gargaarka la gaari lahaa Soomaaliya ay hor taaganyihiin Maleeshiyadka alshabaab oo uu ku sheegay in ay caqabad ku yihiin dadka Soomaaliyeed.
Waxa uu ka dhawaajiyay in goobaha ay joogaan Dowlada KMG ay gargaar la gaarayaan, waxa uuna ka dhawaajiyay goobaha ay joogaan shabab ay ka jiraan dhibaatadii ugu xumayd oo iskugu jira Biyo la’aan, gaajo iyo abaaro Xoogan.
Mr. Mark Bowden ayaa sheegay in umada Soomaaliyeed ay u baahanyihiin gargaar Deg deg ah, waxa uuna ugu baaqay alshabaab ay o ogoladaan in raashin gar gaar iyo kaalmo la gaarsiiyo gobolada ay ka taliyaan oo ka caagan hay’adaha gar gaarka in ay kaalmooyin bini’aadanimo siiyaan dadka la le’anaya macluusha iyo gaajada.
Yuweri: Waxaan Saraakiisha U Badalney Sidii Shabaab Looga Taqluusi Lahaa
Horaantii bishan ayay ahayd Markii loo soo magacaabay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho Jeneraal Cusub Ciidamada amisom ee jooga Magaalada Muqdisho.
Waxaa arintaas markii ugu horeysay ka hadlay Madaxweynaha wadanka Uganda Yuweri Musafani oo sheegay in saraakiisha loo soo badalay Soomaaliya ay yihiin kuwii dharabka ka jabin lahaa waxa uu ugu yeeray argagixisada alshabaab ee ka dagaalama Koonfurta Soomaaliya.
Yuweri Musafani ayaa sheegay in ujeedka gaarka ah ee isbadalka loogu sameeyay saraakiisha ugu sareysay ee ciidamada AMISOM ay aheeyd sidii ay dhabarka ugu jabin lahaayeen dhaq dhaqaaqa Al Shabaab ee la dagaalamaya ciidamadooda iyo kuwa dowladda KMG Soomaaliya, iyo sidoo loo taageeri lahaa hay’adaha dowladda KMG Soomaaliya.
“ waxaan saraakiisha amisom ee jooga Muqdisho ugu samaynay is badalka sidii loo sii balaarin lahaa Dagaalka aan kula Jirno alshabaab, iyo sidii loo sii wadi lahaa Guulaha ay gaarayaan Ciidamada Midowga afrika ee jooga Soomaaliya oo garab ka Helaya kuwa Dowlada KMG” ayuu yiri Yuweri Musafani oo Saxaafada la hadlayay shalay mar uu ku sugnaa Madaxtooyada dalkaasi.
Sidoo kale Madaxweynaha Uganda ayaa sheegay markale in uui u Magacaabay Soomaaliya taliye ku xigeenka ugu sareeya ee ciidamada AMISOM kaasi oo loo magacaabay Col Apollo Kasita Gowa.
Xildhbaan Nuur: Ciidamadeena Waxay Ku Dowyihiin Baardheere Iyo Buurdhuube
Xildhibaan Nuur mataan oo ka mid ah hor jogayaasha Maleeshiyaadka jooga Gobolka Gedo ayaa ku hanjabay in ay Weerar ku yihiin Degmooyinka Buurdhuubo iyo baardheere oo ay ku suganyihiin Ciidamada alshabaab.
Mataan ayaa sheegaya in ay u dhaqaaqayaan Ciidamo ka tirsan Dowlada KMG ee Soomaaliya ee dhawan lagu soo tababaray Doolow, waxa uuna sheegay in ay guulo ka gaarayaan Dagaalkaas.
“ Waxaan ku sii jeednaa Degmooyinka Buurdhuubo iyo baardheere oo ay joogaan Maleeshiyaadka Nabadiidka ah, waxaan leeyahay ha ogaadaan in la gaaray Waqtigii laga Xorayn lahaa Goboladaasi” ayuu yiri Xildhibaan Mataan.
Sidoo kale Ciidamo wata gaadiidka Dagaalka oo ay hor kacayaan Xildhibaan Maxamuud Sayid aadan ayaa la soo sheegayaa in ay u dhaqaaqeen halkaasi, lamina oga in ay gacan ku haynta Degmadaasi la Wareegi doonaan iyo in ay iska cabin kala kulmi doonaan Ciidamada alshabaab ee halkaas joogo.
Ra’iisul Wasaaraha Cusub Oo Beesha Caalamka Ka Dalbadey In Loo Gargaaro Dadka Soomaaliyeed.
R/wasaaraha xukuumadda KMG Soomaaliya Dr. C/Wali Maxamed Cali ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay abaaraha iyo macluusha ka taagan Somaaliya, tan iyo intii la ansixiyay 72-saac ka hor.
Dr. C/Wali ayaa sheegay in gobollada dalka ay ka jiraan abaaro sababay in ay dadkii barakacaan qaar badana ay qaxaan, waxa uuna Beesha caalamka iyo Hay’adaha gargaarka ka codsaday in ay gargaar la soo gaaraan Umada Soomaaliyeed ee dhibaataysan.
C/Wali Gaas Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed lagu yaqaano in ay is gargaaraan islamarkaana deriskooda ay ka warqabaan, waxa uuna ka digay in Soomaalida ay ku tashato gacan.
Waxaan Beesha Caalamka iyo Hay’adaha ka codsanaynaa in ay gargaar la soo gaaraan Umada Somaaliyeed, waxana si gaar ah ugu sheegayaa Jaaliyada Somaaliyeed ee dibada ku Nool in ay wax u taraan dadka Soomaaliyeed” ayuu yiri gaas oo shalay saxaafada ugu waramayay magaalada Muqdisho.
R/wasaaruhu wuxuu Hay’adaha Caalamiga ah, Beesha Caalamka iyo dadka Soomaliyeed ugu baaqay in ay cawiyaan dadkaasi, isagoo waqtigaan ku sifeeyay xilliga ay dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin gargaarka.
Sidoo kale shalay ayay ahayd markii Raisal wasaare gaas uu gudoomay Deeq raashin iyo gaadiid u badnaa Booyado ay ugu deeqday Umada Soomaaliyeed Dowlada Imaaraadka carabta.
Imaaraadka Oo Ku Baaqey In Soomaaliya laga Qaado Cuniqabateenka Hubka
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ka codsatay dalka Hindiya in uu hormuud u noqdo olole looga qaadayo cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, si loo qalabeeyo ciidamada dowladda.
Wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta, Sheekh Cabdullaahi Bin Zayed Al Nahyaan ayaa booqasho hal maalin ah ku tegay dalka Hindiya, halkaas oo uu kula kulmay dhiggiisa SM Krishna, waxaana ay labada dhinac ka wada hadleen arrimo badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay.
Sheekh Cabdullaahi Bin Zayed, ayaa sheegay in ay tahay in la qalabeeyo ciidamada dowladda Soomaaliya si ay wax uga qabtaan burcad badeedda hubeysan.
Wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka, ayaa sidoo kale sheegay in keliya aanay aheyn in cunaqabateynta hubka laga qaado Soomaaliya, balse loo baahan yahay in dowladda loo tababaro ciidamada booliska.
Hindiya ayaa horay u sheegtay in iskaashi caalami ah loo baahan yahay si looga guuleysto burcad badeedda Soomaalida.
Kismaayo Iyo Kuwa Sheegta Kala Fog. Q-1aad
Ayadoo aan Indhaha lag laaban karin waxa ay wadaan Qolooyinka sad bursiga ah,ahaayeena Marti, noqdeena marti qoryohooda wadata ayaan dareensiin doonaa in aan waxba ka jirin waxa ay sameynayaan oo ay mar walba shaacinayaan.
Waxaa soo shaac baxay 2001-di in ninka la yiraahdo Cali Khaliif Galeyr asagoo isku sheegaya in uu Ra’iisul wasaare yahay, mar uu yimid wadanka Imaaraadka magaalada Dubai, uuna ku qabtey shir jaraa’id, kuna khudbeeyey in aysan jirin cid leh ama sheegan karta Gobolada Jubooyinka, welibana uu ku shaaciyey idaacadan la yiraahdo idaacada xagleynta, dadka sameysteyna ay u yaqaaniin BBC London.
Hadaba hadii aan wax ka iraahdo hadaladii hunguri doonkii Cali Khaliif Galeyr, miyuusan ogeyn in laga wada dhegeysanaayo hadaladiisa aduunka daafihiisa, miyuusana aheyn qof ceybi qabata, mise waxa uu wataa qaacidadii ay sheegan jireen oo aheyd “Ceeb Looma Dhinto”, waxaase uu noqdey mid aan waxba isku faleyn.
Hadaba hadaan wax xoogaa ka taabto Jubada Hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo waa magaalo ay magaceedu uu ka kooban yahay laba magac, labadaas magac marka la isu geeyana yeelanayaan wax manaafacaad u leh noolaha oo dhan.
Intaana u guda galin magaca kismaayo sharaxaadeeda, waxaa Cali Khaliif Galeyr oranayaa qolodaad dhulka u raadineysid awowgooda wabiga ma soo gudbey.
Teeda labaad waa tii aad heshiiska ku aheydeene adiga iyo Cabdulqaasim in aad dhulka qeybsataane, markii aad heli weydey qeybtaad raadineysey miyaad mucaaradeysaa qofkaad heshiiska soo wada gasheen, oo aadna idaacadaha ka shaacineysaa adigoo oranaya asagoo maleeshiyadiisa ka soo saarin dhulka ay xooga ku heystaan uusana ku wareejin dhulka dadkiis Soomaaliya heshiis ka dhici maayo, Cali khaliif wuxuu hore u yiri Jubooyinka qolo gooni u leh oo sheegan karta ma jirto, hadana wuxuu yiri C/qaasim asagoon maleeshiyadiisa ka soo saarin oo uusan ku wareejin dhulka dadkiisa Soomaaliya heshiis ka dhici maayo, miyeysan is khilaafsaneyn hadaladiisa, maxaase ku kalifey in markii hore uu inkiro dhulka dadkiisa, markuu waayey cadkiisana u shaacisey in dhulka Jubooyinka ay dad leeyihiin, dadkaasna aad u tiri waa DigilMirifle.
Cali khaliif miyuusan aheyn qof aqoon leh, ileyn waa tan lagu sheegee in uu professor yahaye, miyuusan u fiirsanin hadaladuu ku hadlo, mise wuxuu yahay qof maskaxdiisa wax si ka yihiin, hadaba sidey ku dhacdey in sanad gudihiisa hadaladiisa ay isu buriyaan, labadan hadal sidey qof keliya sanad gudihiisa ooga soo wada bixi karaan haduusan jaahil aheyn, Caliyow aqoontaada waa mid ay fari ku taagan tahay, qolo aan aqoona macalim jaamacadeed ayey kaa dhigteen, waxaanse ku leeyahay markaad ardada wax bareysid ha kala hadlin, hadii kalese waxaad noqoneysaa mid shaqadiisa waaya.
Hadaba hadaan ka jawaabno wararkii uu Cali Khaliif Galeyr uu ku sheegey shirkii jaraa’id ee uu 2001 ku qabtey wadanka Imaaraadka Carabta “U,A,E” kuna yiri Jubooyinka cid gooni u sheegan karta oo iska leh ma jirto, hadaba hadaan u guda galno sharaxaada magaalada Kismaayo, Kismaayo waxay ka kooban tahay laba magac oo kala ah “KISIMA” oo ah Ceel iyo YOO oo ah Dheer” labada magac marka la isu geeyo waxey noqdaan “CEELKII DHEERAA”, luqadana waa af BAAJUUNI, Baajuuntuse ma Laas Caanood bay ka yimaadeen, mise magacan ayaa meesha laga baxshey.
Jubada Hoose waqtigii gumeysiga waxa ay ka tirsaneyd “Kenya”, waxaana Soomaaliya ku soo wareejiyey Ingriiska markii uu wadanka xoog oogala wareegey gumeysigii Telyaaniga.
Hadaba dhulka Jubooyinka hadii uu yahay dhul “HARTI” maxaa magacyada Gobolka oo dhan ka dhigey magacyo Baajuun ama Luqad Baajuun, Baajuuntuse ma Harti baa mise Hawiye, hadaan Baajuunta laftigeeda aan sharaxno, waa dad u dhashey TUNNI, Tuniduna waa dad aad iyo aad loo yaqaano, waana wiil ka mid ah wiilasha uu dhaley odeygii AW-DIGIL, taana ay ka tarjumeyso in ay Digil yihiin.
Hadaba Cali Khaliifow miyaadan aheyn qof xishooda oo wax isku fala, sow umadda oo dhan kuma filna magacyada magaalooyinka oo keliya intaanan meel kale isla aadin, waxaa iga su’aal ah jawaabna aan ka rabaa in ay ii kala saaraan Soomaalida, sababta ay isku magac u noqon waayeen, Degmooyinka Laas Caanood iyo Degmooyinka Jubada Hoose.
Maxaa (dhab ahaan) lagu haystaa Shariif Xasan? Q-2aad
Juunyo 29, 2011
1. Dirirtii Baarlamaanka ee Kenya.
Markii lagu aas-aasey dowladdii C/laahi Yuusuf Kenya, durbadiiba waxaa la soo jeediyey in ciidamada Itoobiya la keeno waddanka, iyadoo markaa sida la sheegey caawin lahaa dowladda. Shariif Xasan waa uu diidey, ma aheyn wax qarsoonnaa.
Diidmada uu diidey inay ciidan shisheeye soo galaan waddanka ayuu ka abuurmey dagaalka illaa manta u dhaxeeya Shariif Xasan iyo C/laahi Yuusuf oo uu ugu danbeeyey weerarkii C/laahi Yuusuf maalmo ka hor BBC qeybta Soomaliga kaga soo qaadey isagoo jooga Yemen.
Shariif Xasan wuxuu si toos ah uga guuleystey C/laahi Yuusuf,Ra’isul Wasaarihiisi Geeddi iyo xulufadooda ka dib markii uu baarlamaanku diidey in la keeno ciidankaasi shisheeye, iyagoo Shariif Xasan iyo xulufadiisa ay sabab uga dhigeen in ciidamada dowladaha safka hore aysan soo geli karin Somalia sharci ahaan.
Waa tii gacmaha la isla galay oo loo kala istaagey labo saf oo kala taageerayey in la keeno Itoobiya ciidankeeda iyo inaan la keenin.
Qaar badan baa ku eedeeyey in Shariifku ay Hawiye wataan, oo Hawiye diiddan yahay in ciidan la keeno Somalia, Daaroodna ciidanka rabaan, Shariif Xasan-na Hawiye taageerey.
Doodda noocaasi ah waa mid meel ka dhac ku ah kartida Shariifka waayo rag badan oo Hawiye ah oo uu prof. Geeddi ka mid yahay waxay u ololeynayeen keenista ciidanka Itoobiya.
Diidmada Itoobiyaanku sow ma aheyn talaabo waddani-nimo?
Dhacdadaas muhiimka ah ee weliba dagaalka keentey oo caalamka laga wada daawadey, waxaa loogu kala baxay Itoobiyaan doon iyo Itoobiyaan diid. Waxaan is weydiidey maxay cidina u xusuusan la’dahay oo Shariif Xasan loogu amaani waayey? Guuleed Abtidoon haddii uu ahaan lahaa ninka diideey Itoobiyaanka ma la buun buunin lahaa mise sidan ayaa loo inkiri lahaa?
Ma og tahay in ay jiraan qaar ku eedeeya Shariif Xasan inuu Itoobiyaankaba ka danbeeyey keenistooda?
2.Maxkamadihii Islaamiga ahaa
Waxaa xigey, aas-aaskii maxkamadaha kolkii la heshiisiinayey dowladda iyo Maxaakiimta oo iyagu markaa awood badan lahaa intii aysan ciidamada Itoobiya waddanka imaan ka hor.
Shariif Xasan isagoo kursigiisa uu u bed qabo ayuu wuxuu ka doortey in la heshiisiiyo maxaakiimta iyo dowladda si aan xabadi waddanka uga dhicin, waxaan xusuusanaa safaradiisi Muqdishu, kuwii Afgooye ee isdaba joogga ahaa isagoo marka madaxda dowladduna ay ka soo horjeedeen waan-waanta uu waday.
Qorshaha Geeddi iyo C/laahi Yuusuf wuxuu ahaa in ciidamada Itoobiya ay soo galaan waddanka, Muqdisho-na la bambeeyo. Faa’idada ugu jirtey Geeddi iyo C/laahi qiddo dagaaleedkaasi waxaa la sheegaa in ay ahaayeen sidan;
·Geeddi oo markaa rabey inuu soo saaro awood Muddulood-ka uu ka dhashey, habka keliya ay sidaa ku suurtoobi karteyna ay aheyd in beesha Habar Gidir la qixiyo si tiro ahaan ay Muqdisho uga yaraadaan, iyo in dhaqaale ahaan la wiiqo. Waad maqasheen wareysiyadii is daba yiiley ee Maxamed Dheere, Jeelle iyo odayaasha Muddulood qaar bixinayeen ee salka ku hayey in Habar Gidir ay Xamar ka baxaan.
Duqeymaha ugu badan waxay ka dhacayeen Suuqa Bakaaraha oo looga dan lahaa in awoodda dhaqaale ee beeshaasi la tirtiro, illaa xadna waa suurto gashey ee waxaa dhacdey in taariikhda 20-ka sanno ee dagaaladan ay socdeen ay beesha Habar Gidir markii ugu horeysey la arko ayagoo Wasiir raajicinaya, misna la’ba, maddaama loo arkey inuusan jirin dhib weyn oo ka imaan karey, Waayo waxaa si toos ah u burburiyey tiro iyo tayo-ba Itoobiya iyadoo la wada eeganaayey, Taasi waxaa la sheegaa inay aheyd dantii istraatiijiga aheyd ee Geeddi.
·C/laahi Yuusuf danta ugu jirtey waxay aheyd, in uu awooddiisa dowladeed ku ballaariyo Soomaliya oo dhan, si uu sidaa u suurto geliyana waxaa qasab aheyd inuu bur buriyo awoodda beesha Hawiye ee iyaga markaa qeyb weyn ku lahaa dagaalada Somaliya, maaddaama is faham wax qeybsi uu kala dhexeeyey Abgaal-na, hanjabaadda keliya ee jirtey waxay ahayd beesha Habar Gidir.
Dadka qaar waxay sheegaan in xitaa uusan meesha ka maqneyn qorshe aargoosi ee taariikh ahaan u dhexeeyey Daarood iyo Hawiye ee iyagu lagu eedeeyo inay yihiin labada qolo ee waddankan baabi’iyey.
Isku soo duub oo natiijada soo if baxaysey haddii lagu dhaqaaqo qorshe dagaaleedkaasi wuxuu ahaa dhimasho, dhaawac, barakac iyo hanti burburta, sida markii danbe-ba dhacdey.
Waxaa dhintey tobeneeyo kun, waxaa dhaawacmey boqolaal kun, waxaa qaxay nus malyuun wax ku dhow, kufsasho iyo boob hantiyeedna lama qiyaasi Karin sida ay weriyeen hey’adaha xuquuqda aadanaha u dooda.
Dhibaatooyinkaasi ma noqon kuwo qolo keliya ku ekaadey ee waxay saameeyeen dad badan oo aan waxba geysan shiddo ah.Shariif Xasan kuma guuleysan inuu dadka Soomaliyeed ka badbaadiyo dhibkaasi, Laakiin wuxuu go’aansadey inuusan qeyb ka noqon isaga shaqsi ahaan maamulkii geysanayey xasuuqaasi.
Ibdow Eeding Hoosow
Dhalanyaro Soomaali Ah Oo Lagu Diley Koonfur Afrika
Dhalinyarada la toogtay oo watay gaari ay cunto ku wadeen isla markaana ay ugu soo adeegeen Dukaan ay lahaayeen ayaa waxaa toogtay kooxo burcad ah oo hubeysan, waxaana dadkan la dilay lagu kala magacaabi Jiray Daa’uud Afrax iyo Abuukar Shiikh.
Sidoo kale Isniintii todobaadkan ayaa waxaa isla magaalada Capeton lagu dilay laba dhalinyara ah oo dukaan iibineysay, waxaana lagu kala magacaabi jiray Carfaaye Cismaan Calasow iyo Max’ed Xasan.
K.Afrika ayaa inta badan waxaa ka dhacay qorshayaal xiriirsan oo lagu qaarijinayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkaasi nolasha u raadsaday.
Baarlamaanka Oo Cod Buuxa Ku Ansixiixey Raisul Wasaaraha Cusub,
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa goor dhoweyd cod aqlabiyad leh ku ansixiyay Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Dr. C/wali Maxamed Cali Gaaz, kadib kulan ay ku yeesheen Xarunta Golaha Shacabka oo ay ka soo qeyb galeen Xildhibaanadii ugu faraha badnaa.
Kulanka Baarlamaanka oo ahaa kii u horeeyay ee ay yeeshaan Xildhibaanada tan iyo bishii Febraayo ayaa waxaa ka soo qeyb galay 443-xildhibaan, iyadoo kulanka Baarlamaanka oo uu shir gudoominayay Gudoomiye Shariif Xasan uu madasha ka sheegay ajandaha shirka inuu yahay ansixinta Ra’iisul Wasaaraha.
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Ra’iisul Wasaaraha cusub Dr. C/wali Gaaz ayaa ku sugnaa, iyagoo khudbado kala duwan ka jeediyay,isagoo Ra’iisul Wasaaraha ka sheegay fadhiga inuu soo magacaabi doono Gole Wasiiro tayo leh.
Intaas kadib ayaa Xildhibaanada Baarlamaanka waxaa lagu wargeliyay inay gacan taag ku ansixiyaan Ra’iisul Wasaaraha, waxaana 437-cod lagu ansixiyay Ra’iisul Wasaaraha, halka ay diiday afar, 2 ay ka aamustay, sidaasna uu kaga dhawaaqay Gudoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan in Ra’iisul Wasaaraha uu ansax ku yahay muddo 30-cisho gudahood laga sugayo inuu soo dhiso Xukuumad.
Kulanka Baarlamaanka ayaa ahaa mid aad uga duwanaa kulamadii hore, waxaana xildhibaanada dhamaantood u muuqdeen kuwo isku mowqif ahaa, waxaana dad badan ay saadaalinayeen in Ra’iisul Wasaaraha cusub la ansixin doono, maadaama meesha uu ka baxay khilaafkii xarig jiidka ahaa ee u dhaxeeyay Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Juunyo, 2011.